Borosy hosodoko diy, borosy vita amin'ny loko nilony, borosy poliestery - YINGTESHENG
MANarahaba antsika YTS
Nandritra ny telopolo taona, ny "kalitao ambonin'ny zava-drehetra" dia nampiofanina foana tao an-tsain'ny mpiasa.
Manana mpiasa maherin'ny 300 ny YTS, ao anatin'izany ny mpamorona matihanina, injeniera. Manana ny fahaiza-mivoatra ny faritra sy vokatra vaovao izahay hanomezana ny mpanjifa ny vokatra tsara indrindra.
Raha te hanana fifaninanana bebe kokoa dia nahazo ny YTS Beijing Brush Factory sy ny marika hoe "Great Wall" ny YTS tamin'ity taona 2016 ity.
Taorian'ny fampiharana nandritra ny taona maro, rafitra rafitra fitantanana kalitao GB / T 19001-2016 / ISO9001: 2015, natsangana ny rafitra tontolo iainana GB / T 24001-2016 / ISO140001: 2015 ary nandalo ny fanamarinana iraisam-pirenena WCA sy SQP.
Omeo serivisy kalitao
Ny YTS dia manana fitaovana mazàna maherin'ny 100 setroka fanamboarana sy fanandramana mandeha ho azy, izay afaka manatsara ny fahaizan'ny famokarana YTS.
YTS dia manana atrikasa famokarana mpiasa maherin'ny 150 ary samy nahatsapa ny asa famokarana semi-automatique sy automatique tanteraka isika rehetra. Ny famolavolana ny toeram-piasana dia mirindra sy mitombina.
Hatramin'ny nanombohan'ny YTS tamina atrikasa iray mahazatra an'ny fianakaviana ao Baoding, Hebei tamin'ny taona 1990, dia nandinika ny fomba fitantanana ny "Kalitao ambonin'izany rehetra izany". Tany am-piandohana, ny asan'ny YTS dia ny mivarotra volon'omby nandrahoina, ary vetivety dia io ihany no mpamatsy ny Beijing Brush Factory.
Tamin'ny 2005, ny fampidirana ny haitao sy ny milina dia namela ny YTS hanitatra ny orinasany handoko ny faritra borosy. Tamin'io taona io ihany dia nanangana ny foibeny ny YTS - mpanamboatra ao amin'ny Qingyuan Industrial Park, faritra ambanivohitra Baoding, Hebei. Maherin'ny 700000 metatra toradroa ny velarany, noforonin'ny zavamaniry mpanao zirony nandrahoina, zavamaniry fanaovana sarina filamentana, sampana fanaovana birao, fanaovana borosy…